ကွယ်လွန်သူ သမ္မတဟောင်း ဂျော့အိပ်ခ်ျဒဗလျူဘုရှ်၏ ရုပ်အလောင်း ကက်ပီတောသို့ရောက်ရှိ၊ သုံးရက်ြ? - Yangon Media Group
ကွယ်လွန်သူ သမ္မတဟောင်း ဂျော့အိပ်ခ်ျဒဗလျူဘုရှ်၏ ရုပ်အလောင်း ကက်ပီတောသို့ရောက်ရှိ၊ သုံးရက်ြ?
ကွယ်လွန်သူသမ္မတဟောင်း ဘု(ရှ်)၏အောက်မေ့ဖွယ်အခမ်း အနားစတင်ကျင်းပသော ဒီဇင် ဘာ ၃ ရက် ညနေပိုင်းတွင် ဘုန်း တော်ကြီး ပက်ထရစ်ဂျေကွန်နီက ဘု(ရှ်)၏ ဂုဏ်ပုဒ်သတင်းများကို ချီးကျူးပြောကြားခဲ့သည်။ ဘု(ရှ်) ၏ ရေတပ်အရာရှိဘဝမှ နိုင်ငံရေး လောကလွှတ်တော်အမတ်ဘဝသို့ ကူးပြောင်းရောက်ရှိလာပုံ။ ကု လသမဂ္ဂသံအမတ်၊ တရုတ်သံအ မတ်၊ စီအိုင်အေညွှန်ကြားရေးမှူး၊ အမေရိကန်ဒုတိယသမ္မတမှ သမ္မတ အထိဖြစ်လာခဲ့ပုံများကို ထုတ်ဖော် ချီးကျူးပြောဆိုခဲ့သည်။ ”သူဟာ ကြီးမြင့်သူတစ်ဦး အဖြစ်နဲ့ ကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်”ဟူ ၍ လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူ ပေါလ်ရန်းက ထုတ်ဖော်ပြောဆို လိုက်သည်။
ပြည်သူပြည်သားများမှာ အချိန်ကိုလေးစားသည့် အလေ့အကျင့် အားနည်းနေသေး၊ အချိန်ကိုလေးစားတတ်ရန် ?
ကာတာနိုင်ငံက အိုပက်အဖွဲ့မှ နုတ်ထွက်မည့် ကိစ္စသည် ဆော်ဒီနှင့် မသင့်မြတ်မှုကို ဖော်ပြနေကြောင်
နိုင်ငံရေးပါတီ တည်ထောင်ခွင့် လျှောက်ထားလိုသူများ ယခုနှစ်ကုန် နောက်ဆုံးထား လျှောက်ထားရန်ေ